Filimka Kaabil Iyo Maalintiisa 3-aad Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Ka Keenay - Hablaha Media Network
Filimka Kaabil Iyo Maalintiisa 3-aad Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Ka Keenay
HMN:- Hrithik Roshan filimkiisa Kaabil ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay lacagaha uu keenay maalintiisa sedexaad labada dhinac kooxda cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa filimkaan iska leh.
Shabakada Boxoffice India waxay si rasmi ah u sheegtay in Kaabil maalintiisa 3-aad keenay 7.50 Crore (Trade Figure) waa lacagaha ay kasoo xigteen kooxda cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa tiyaatarada iska leh.
Dhinaca kale kooxda filimka Kaabil iska leh iyagana waxay shaaca ka qaadeen in filimkaan maalintiisa 3-aad uu keenay 9.77 Crore (Producer Figure) waxaana muuqato in farqi u dhaxeeyo labada dhinac lacagaha ay baahinayaan.
Kaabil xaalad adag ayuu ku sugan yahay madaama filimkaan maalintiisa kowaad lacagaha uu keenay ka yar tahay maalinta sedexaad lacagaha uu soo xareeyay mana ahan astaan wanaagsan.
Kaabil mudo sedex maalmood lacagaha uu keenay waa 31 Crore (Trade Figure) halka kooxda filimkaan iska leh iyagana baahinayaan in mudo sedex maalmood uu soo xareeyay 38.87 Crore (Producer Figure) waxaana u dhaxeeyo labada dhinac farqi 8 Crore ku dhow.
Fadlan hoos kaga bogo shabakada Boxoffice India lacagaha ay Kaabil si rasmi ah kaga soo bandhigtay 3-maalmood ee ugu horeyso:
Arbaco – 8 Crore
Khamiis – 15.50 Crore
Jimco – 7.50 Crore
Wadarta Guud – 31 Crore (Trade Figure) Waa Qaybta Af Hindiga kaliya lagu daawaday hadii lagu daro lacagaha Tamil iyo Telugu lagu daawada filimkaan keenay lacagaha guud ee Kaabil wa 32.25 Crore (All India Business)
Fadlan hoos kaga bogo kooxda filimka Kaabil iska leh mudo sedex maalmood lacagaha ay si rasmi ah u baahiyeen inuu filimkaan soo xareeyay:
Arbaco – 10.43 Crore
Khamiis – 18.67 Crore
Jimco – 9.77 Crore
Wadarta Guud – 38.87 Crore (Trade Figure) waa isku darka lacagaha guud ee filimkana dhamaan luqadaha lagu daawaday.
Kaabil waa inuu sameeyaa sare u kac xoogan maal maha sabtiga iyo axada sidoo kalena laga bilaabo Isniinta ganacsigiisa uusan hoos u dhac weyn sameynin si todobaadkiisa labaad uu filimkaan tiyaatarada filimka Raees ula qeebsado.